Lammiiwwan Sudaan Kumaan Laka’aaman Balaa Lolaa Hamaaf Saaxilaman
Fulbaana 03, 2020
Lammiiwwan Sudaan kuma hedduutti laka’aman jaarraa tokko keessatti lolaa bishaanii hamaa jedhamuun miidhaan irra ga’uu isaa fi rakkoo namoomaa hamaa kana irraa dandammaachuuf gargaarsa yeroo hatattamaa eeggachuuf ka saaxilaman ta’uu tokkummaan mootummootaa gabaasee jira.
Tokkummaan mootummootaa gargaarsaaf gaafachuun kun kan dhaga’ame guyyootaan darban keessa roobi yandoon Itiyoopiyaa keessatti robe lolaa hamaan gara Sudaanitti akka yaa’u erga taasisee booda. Lolaan bishaanii kun lagi Abbayyaa waggoota 100 keessatti akkaan akka guutuuf sababaa ta’e.
Daafoon isaas hamaa dha. Mootummaan Sudaan akka gabaasetti yoo xiqqaate namoonni 90 ta’an yoo du’an kanneen 380,000 ta’an guutummaa biyyattii keessaa miidhaan irra ga’ee jira. Manneen jirenyaa 80,000 ta’an kan manca’an yoo ta’u uummanni kuma hedduutti laka’amu immoo mana jireenyaan ala ta’anii jiran. Kana malees manneen barnootaa 34 fi keellaaleen fayyaa 2,700 ta’an tajaajila dhaabanii jiran.
Dubbi himaan waajjira dhimmootii qindeessa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Jens Laa’erkee akka jedhanitti balaan kun dhaqqabe ennaa vaayiresiin koronaa guutummaa biyyattii keessa faca’ee jirutti jedhan.
Baqataan Afrikaa deemmaa du’aa fi jireenna qabduunb idiruun garba irra yaa'aa Awurooppaatti godaanuu fi godaanuuf falata
Pirezidaanti Tiraampi Kenosha, Wisconsin dhaqee poolisiin wal mari’atee qabeenna badellee laale
Amerikaan waldaa biyya 170 qabu Dhaabii Fayyaa Addunyaa, WHO qorsa vaayireessii koronaa waliin hojjachuuf yayyabe keessaa baate
Pirezedent Keeniyaattaan Weerarri COVID – 19 Keeniyaa Keessatti ‘Gad Bu’uuf Jira’ Jedhan
Kora Gumii Gaayoo 41essoo Abbaan Gadaa Booranaa, Kuraa Jaarsoo Yaame Dhaasitti Taa'uutt Jiran